Amụma pụtara azụ na Bible - Ihe Bible Pụtara
na -eche ịgbalite nke a nwere ike were oge verizon
otu esi edozi iphone mgbe enyo ga -acha oji
gịnị mere na ekwentị m anaghị emelite ngwa m
Amụma pụtara azụ n'ime Bible.
N'ebe ahụ, ị ​​nwere ya ọzọ! Azụ ahụ! Ị ga -ahụkwa ya ebe niile! Ọfọn, n'ebe niile. Karịsịa n'ụgbọ ala. Na azụ ụgbọ ala, ka ọ bụrụ nke ziri ezi. N'okporo ụzọ - ebe ahụ ka ị na -ahụ akara azụ. Gịnị ka ọ na -anọchi anya ya, azụ̀ ahụ? Ọ nwere onye nwere ike ịgwa m ihe nke ahụ pụtara?
Na Luk isi 5: 1-9, anyị na-agụ maka ịchụ azụ n'ụzọ ọrụ ebube:
Otu ụbọchị, ka Jisọs guzo n'akụkụ ọdọ mmiri Genesaret, igwe mmadụ gbara ya gburugburu na -ege okwu Chineke ntị. Ọ hụrụ ụgbọ mmiri abụọ n'akụkụ ọnụ mmiri, ndị ọkụ azụ̀ hapụrụ ebe ahụ, na -asa ụgbụ ha.3Ọ banyere n'otu n'ime ụgbọ mmiri ahụ, nke Saịmọn, ma rịọ ya ka ọ kwapụ ntakịrị n'ụsọ mmiri. Mgbe ahụ, ọ nọdụrụ ala si n'ụgbọ ahụ na -akụziri ndị mmadụ ihe.
4Mb hee o kwubìri okwu, ọ si Saimon, tubà onwe -gi nime miri di omimi, tubà ub nu ka i we jide.
5Saịmọn zara, sị, Nna anyị ukwu, anyị rụsiri ọrụ ike abalị niile ma anyị ejideghị ihe ọ bụla. Ma n'ihi na i kwuru otu a, aga m awụpụ ụgbụ.
6Mgbe ha mere nke a, ha jidere nnukwu azụ nke ụgbụ ha malitere ịgbawa.7Ya mere, ha nyere ndị mmekọ ibe ha nọ n'ụgbọ nke ọzọ aka ka ha bịa nyere ha aka, ha wee bịa jupụta ụgbọ mmiri abụọ ahụ nke mere na ha malitere imikpu.
8Mgbe Saịmọn Pita hụrụ nke a, ọ dara nʼikpere Jisọs sị, “Si n'ebe m nọ pụọ, Onyenwe anyị; A bu m onye mmehie!9N'ihi na ọ tụrụ ya na ndị enyi ya niile n'anya nnukwu azụ ha gbutere,
Azụ Ndị Kraịst
Kedu ihe ị na -agwa m? Azụ a, ọ bụ akara ndị Kristian? Ọ dịghị ịnyịnya ibu ga -ewere nke ahụ bụrụ eziokwu! Ndị Kraịst na azụ, gịnị jikọrọ ha na ibe ha? Ma ọ bụ, ide mmiri ahụ ga -alaghachi n'oge na -adịghị anya; ihe niile ga -abụ oghere. Mba? Gịnịzi? Ndị Kraịst oge ụfọdụ na-asị blub-blub-blub?
Ọ dịghị! Ịchọghị ịgwa m na ị maghị kpọmkwem onwe gị. Ọ bụ eziokwu? Ọ bụ na ọtụtụ Ndị Kraịst amaghị ihe azụ a pụtara? Mgbe ahụ ọ bụ oge mmadụ kọwara nke ahụ!
Ihe azu pụtara
Ọ dị mma, lee nkọwa m. Naanị nọdụ n'ihu ya.
Akara azụ nke e dere site na mmalite nke oge anyị, Ndị Kraịst oge mbụ chepụtara ya. N’oge ahụ, ndị Rom na -achị ihe ka ukwuu n’ụwa. Ebe ọ bụ na amachibidoro ikwere na otu Chukwu na ịmata otu Onyenwe anyị, Jizọs Kraịst (ọ bụ ihe iyi egwu nye ofufe nke eze ukwu), Ndị Kraịst nọ na alaeze ukwu Rome kwesịrị ịkpachara anya n'okwu ha. Ha na -achọ akara ụbọchị niile nke na -agaghị apụ apụ ozugbo, mana nke ahụ zuru ezu ikwu iji gbaa ibe ha ume. Azụ bụ ihe ịrịba ama dị otú ahụ. Ọ bụ akara nke Jizọs Kraịst.
Ya mere, azụ a, bụ otu n'ime akara ndị Kraịst kacha ochie. Ndị Kraịst ejirila ya ihe dị ka afọ 70, mgbe naanị ọgbakọ Ndị Kraịst ole na ole pụtara, na -eto megide mmegbu. A kpagburu Ndị Kraịst mgbe ụfọdụ, mgbe ụfọdụ na mpaghara, kamakwa na Alaeze Ukwu Rom niile.
Echekwala nkọwa dị iche iche nke ịta mmadụ ahụhụ, gụnyere ịkpọgide ya n'obe na ogbugbu nke kwụsịrị n'etiti anụ ọhịa n'ọgbọ egwuregwu. Azụ ahụ bụ ihe e ji amata Ndị Kraịst n'oge a jupụtara n'ọgba aghara. Ọ bụ akara na -amasị echiche.
Ọ bụghị na azụ n'onwe ya kwuru ọtụtụ ihe. Ọ bụ maka ihe mkpụrụedemede okwu azu pụtara. Grik bụ asụsụ ụwa n'oge ahụ. Na ndọrọndọrọ ọchịchị, ụdị echiche ndị Rom (Latin) meriri, na ọdịbendị, ụdị echiche Grik.
Okwu Grik maka azụ bụ 'ichthus.' N'ime okwu a, ezoro mkpụrụedemede mbụ nke aha na aha Jizọs: Iesous Christos THeou Uios Soter (Jizọs Kraịst, Ọkpara Chineke, Onye nzọpụta). Nke ahụ bụ ihe ọ bụ! Azụ dị ka okwuntughe. A paswọọdụ aka. Onye ọ bụla sere azụ gosiri na -enweghị okwu na ọ bụ Onye Kraịst: ị kwenyere nkwupụta okwukwe nke mkpụrụedemede nke okwu ichthus zoro aka na ya.
Akara azụ na-arụ ọrụ dị ka nkwupụta nzuzo (zoro ezo) maka Ndị Kraịst na-asụ Grik. Mana gịnị ka okwu ndị mere azụ ichthus dị ka ihe nnọchianya Ndị Kraịst dị mkpa pụtara? Ichthus na -anọchite anya nke a:
CH Christos Kraist
Onye nzọpụta Soter
Jizọs biri n'Izrel puku afọ abụọ gara aga, nke na -abụghịzi akụkụ nkuku nke Alaeze Ukwu Rom. Ọ bụ ezie na ndị Batavia na Kanines Faten ka bi na mba anyị, enwere ọdịbendị na -eme nke ọma n'Izrel ruo ọtụtụ narị afọ. Ya mere, ndị dịkọrọ ndụ dekọrọ akụkọ ndụ Jisọs. Akwụkwọ ha dị na Baịbụl.
Anyị na-agụ na Josef, onye ọkwá nkà si n'ebe ugwu Israel, Chineke nyere ya ntụziaka ka ọ kpọọ nwa ahụ ga-amụ Mmụọ Chineke na Meri (onye ọ ga-alụ ọhụrụ) Jizọs. Aha ahụ Jizọs pụtara na Chineke na -azọpụta. Ọ bụ ụdị Grik nke aha Hibru Joshua (Hibru bụ asụsụ izizi nke Israel). Site n'aha a, a kara akara ọrụ ndụ Jisọs: ọ ga -azọpụta ndị mmadụ n'aha Chineke n'ike mmehie na ọrịa.
Na n'ezie, n'oge ọ na -arụ ọrụ n'Izrel, ọ rụrụ ọrụ ebube dị ịtụnanya, na -atọhapụ ndị mmadụ n'ụdị ọrịa na ike mmụọ ọjọọ niile. Ọ sịkwara: Naanị mgbe Ọkpara ahụ mere ka ị nwere onwe gị ka ị ga -enwere onwe gị n'ezie. Otú ọ dị, mgbe afọ atọ gasịrị, a tụrụ ya mkpọrọ ma maa ya ikpe ọnwụ n'elu obe, bụ́ ngwá ọrụ ahụhụ ndị Rom. Ndị na -emegide ya tiri mkpu, sị:
Nkwa ekwere na aha ya na atụmanya ọ kpọtere na ndụ ya yiri ka akagbuola. Ruo ụbọchị atọ ka e mesịrị, ọ dị ka o si n'ili bilie. Akwụkwọ Nsọ na -enye nkọwa zuru ezu banyere ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya ma kwuo ihe dị ka narị mmadụ ise ji anya ha hụ ya. Jizọs kwanyeere aha ya ùgwù. O meriela onye iro ikpeazụ, ọnwụ - ọ nweghị ike ịzọpụta ndị mmadụ, mgbe ahụ? Ọ bụ ya mere ndị na -eso ụzọ ya ji kwubie: aha ya bụ naanị ya n'ụwa nwere ike ịzọpụta mmadụ.
Akwụkwọ ndị dị n'ime Akwụkwọ Nsọ nke edere ndụ Jizọs (oziọma anọ) ka edere n'asụsụ Grik. Ọ bụ ya mere e ji kpọọ aha ya Kraịst dị ka Kraịst nwere aha Grik ya. Okwu ahụ pụtara onye e tere mmanụ.
Gịnị ka ịbụ onye e tere mmanụ pụtara? N'Israel, ndị nchụàjà, ndị amụma, na ndị eze e tere mmanụ mmanụ maka ọrụ ha: nke ahụ bụ ụtụ pụrụ iche na nkwenye sitere n'aka Chineke. E tekwara Jizọs mmanụ (Chineke ji mmụọ nsọ tee ya mmanụ) ịrụ ọrụ dị ka onye nchụàjà, onye amụma, na eze. Dị ka Bible si kwuo, ọ bụ naanị otu onye nwere ike ịrụ ọrụ atọ a n'otu oge. Ọ bụ Mesaịa (okwu Hibru maka Kraịst ma ọ bụ Onye E Tere Mmanụ) ka Chineke kwere ná nkwa.
Ugbua n'akwụkwọ mbụ nke Akwụkwọ Nsọ (nke e dere ọtụtụ narị afọ tupu ọmụmụ Jizọs), ndị amụma kwupụtara Mesaịa a. Ugbu a ọ nọ ebe ahụ! Ndị na -eso ụzọ Jizọs kpọbatara Jizọs dị ka Mesaịa nke ga -atọhapụ ha n'aka ndị agha Rome wee nye Israel ọnọdụ dị mkpa na maapụ ụwa.
Mana Jizọs nwere alaeze ọzọ n'uche nke agaghị enwe ike ịtọ ntọala ya ruo mgbe ọ gara n'ụzọ nke ala wee merie ọnwụ. Mgbe ahụ ọ ga -aga eluigwe were nye ndị mmadụ chọrọ ịmata ọbụbụeze ya na ndụ ha mmụọ nsọ. N'akwụkwọ Bible bụ Ọrụ Ndịozi, nke sochiri oziọma anọ ahụ, anyị nwere ike gụọ na nke a mere n'ezie.
N'omenala Izrel, ọkpara bụ onye nketa kacha mkpa. Nna nyere ya aha ya na ihe onwunwe ya. Na Baịbụl, a kpọrọ Jizọs Ọkpara Chineke. Chineke na -egosi na ọ bụ Ọkpara ya ọ hụrụ n'anya mgbe e mere ya baptizim. Mgbe ahụ ọ na -anata mmụọ nsọ wee si otú ahụ nweta nsọpụrụ ruru ya dị ka Ọkpara Chineke.
Na ndụ Jizọs, ị na -ahụ nnukwu ịhụnanya dị n'etiti Chineke, Nna na Jizọs Ọkpara. Mgbe ọ dị afọ iri na abụọ, ọ na-asị Josef na Meri, M ga-eji ihe Nna m na-eme. E mesịa, ọ ga -asị, naanị ihe m na -ahụ ka Nna na -eme. ọ bụrụ na Papa bụ. Ọ na -ekwu na ekele ya, anyị nwere ike ịbụ ụmụ Chineke, ka anyị onwe anyị kwa wee kpọọ Chineke Nna anyị.
Akwụkwọ Nsọ na -ekwusi ike na Jizọs bụ mmadụ zuru oke na ọ bụghị Chukwu pụrụ iche. Ma ọ bụkwa Ọkpara Chineke, onye ike nke mmehie enweghị ike na ya. Ọ bụ Chineke n'ụdị mmadụ, na -eweda onwe ya ala wee bụrụ mmadụ ịzọpụta ndị mmadụ.
Bible bụ akwụkwọ a pụrụ ịdabere na ya. Ọ̀ bụ na i cheghị otú ahụ? N'ụzọ niile enwere ike, a na -eme ka o doo anya ka ihe si dịrị ndị mmadụ. Anyị enweghị ike ibi ndụ dịka Chineke chọrọ ka anyị biri n'onwe anyị. Anyị bụ ndị ohu nke agwa ọjọọ anyị, yabụ, na -emegide onwe anyị na ibe anyị mgbe niile. Chineke enweghị ike ịnabata ihe ọjọọ nke anyị mara. Ikpe na -ezighị ezi anyị na -eme ya, na gburugburu ebe obibi anyị dị ukwuu nke na ntaramahụhụ ọ bụla pere mpe.
Anyị efuola. Ma Chineke hụrụ anyị n'anya. Enwere naanị otu ụzọ isi pụọ na nsogbu a: Ọ ga -anapụta. A ghaghi inye anyị site na oke nmehie nke onye mmegide, Setan na -echekwa. Jizọs ji ọrụ ahụ bịa n'ụwa.
Ya na Setan jere agha wee guzogide ike nke mmehie. O mekwara ihe karịrị nke ahụ. Ọ nọchiri anya mmehie anyị dịka onye nnọchite anya mmadụ niile wee taa ahụhụ ọnwụ, ọnwụ. Ọ nwụrụ n'ebe anyị nọ. Site n'ike nke Mmụọ Nsọ, o sikwa na ndị nwụrụ anwụ bilie ọzọ, na -enye ya ohere ịtọhapụ anyị na mmehie ka anyị na Chineke wee nwee nkwekọrịta.
Jizọs bụ onye nzọpụta anyị ka anyị wee ghara ịdaba n'ikpe, kama ka a zọpụta anyị n'ihi amara Chineke. Nzọpụta ahụ na -emetụta ndị mmadụ n'omume ha. Mmụọ Nsọ na -agbanwe onye ọ bụla ya na Jizọs bi n'ime ka ọ mụta ibi ndụ dịka Chineke chọrọ. Nke ahụ na -eme ka ndụ dị ka onye Kraịst nwee isi ma na -atọ ụtọ, na -enwe atụmanya nke ọdịnihu dị mma.
Jizọs emeriela, n'agbanyeghị na ụwa ka na -ata ahụhụ nsonaazụ mmehie. Anyị nwere ike soro na mmeri ya wee soro Chineke dịrị n'ezigbo ohere, n'agbanyeghị na mmetụta nke mmehie ka dị. Otu ụbọchị ihe niile ga -adị ọhụrụ. Mgbe Jizọs ga -alọta, mmeri ya na -enyefe ihe niile e kere eke. Mgbe ahụ mgbapụta nke Chineke bu n'uche zuru oke.
Olileanya, ọmụmụ a dị mkpirikpi enyela gị ntakịrị nghọta karịa ihe akara azụ azụ pụtara. Otu ihe na -edo anya. Nkwupụta ahụ Jizọs Kraịst, Ọkpara Chineke, Onye Nzọpụta nwere ọdịnaya ebubo nke doro anya na Ndị Kraịst mbụ gosipụtara oke, egwu, na ekele mgbe ha kọwara ihe akara ichthus pụtara.
Ma a ka nwere ihe ọzọ a ga -ekwu maka ya. Nkwupụta okwukwe nke na -ezo n'azụ akara azụ ka na -akpali ọtụtụ nde mmadụ. N'ihi ya, ọbụlagodi taa, azụ azụ ichthus bụ ihe ọtụtụ Ndị Kraịst hụrụ n'anya dịka akara nke okwukwe ha. Achọrọ m ikwu ihe ole na ole gbasara nke ahụ.
Akara azụ ugbu a
Anyị nwere ike ikwu ihe atọ gbasara akara azụ azụ taa.
Nke mbụ, a ka na -akpagbu Ndị Kraịst n'ọtụtụ buru ibu maka nkwenkwe ha. Akụkọ ntaramahụhụ anaghị adịkarị ụkọ. N'agbanyeghị nke ahụ, ụlọ ọrụ pụrụ iche na -akọ mkpagbu Ndị Kraịst na mba niile dị na North Africa na Middle East (gụnyere Israel), na India, Indonesia, China, Cuba, Mexico, Peru, na obodo ndị ọzọ.
Nke abuo, ọ dị ka ụka Ndị Kraịst - ọbụlagodi na narị afọ mbụ nke oge anyị - na -etokarị megide mmegbu. Ị nwedịrị ike ịsị na Iso Christianityzọ Kraịst n'ụwa niile etoola ngwa ngwa dịka afọ iri ise gara aga. Ozi -ọma nke Jisus Kraịst atụfughị ​​ike ikwu okwu, n'agbanyeghị na ị nwere ike iche n'ụzọ ọzọ na mba anyị na -ejighị okpukpe kpọrọ ihe.
Nke ahụ na -ewetara m isi nke atọ. Obodo anyị atụbala ọtụtụ ụkpụrụ Ndị Kraịst n'ime mmiri. Otu o sila dị, enwere ndị mmadụ mgbe niile na-achọpụta ike ọhụrụ nke ndụ nke ozi-ọma. Ọzọkwa, ndị njikwa ghọtara na Iso Christianityzọ Kraịst nwere ike ịnye ntuziaka na ụkpụrụ na ụkpụrụ iji zaa ajụjụ ndị dị mgbagwoju anya na -ebi n'ime ọha anyị.
Enwere mmata na -arịwanye elu n'etiti Ndị Kraịst na ha agbachiri nkịtị ogologo oge. Chọọchị dị iche iche na obodo okpukperechi na -ekepụta obere otu iji weta okwukwe nso n'ebe ndị nwere mmasị nọ. Ndị dị iche iche na -emepe ụlọ ha iji chọpụta, site na Akwụkwọ Nsọ, onye Jizọs bụ na ihe mmetụta mmụọ ya nwere ike ịpụta na ndụ mmadụ na gburugburu ya n'oge nzukọ ezighi ezi. Ozioma di ndu ma dikwa mma.
Ya mere: gịnị kpatara azụ? Ojiji akara ichthus na -eme ka o doo anya na ọbụlagodi taa, ọtụtụ mmadụ na -ewere ihe ọ pụtara dị oke mkpa. Onye ọ bụla buru azụ̀ ahụ na -asị: Jizọs Kraịst bụ Ọkpara Chineke, Onye Nzọpụta!